पौष (७६) – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > प्रकाशन > २०७५ > पौष (७६)
समालोचना : दर्शन, मानवता र सामयिकताको सङ्गम ः कलानिधिका चुनिएका कविता / युवराज मैनाली
January 17, 2019 पौष (७६), समालोचना
‘काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्’ अन्र्तबोधीय चेष्टाभन्दा अहंको पाण्डित्याइँ‚ कुशलताको हतियार चलाउने प्रवृत्तिले काव्यिक रसिक आछन्नतालाई फाँड्न सक्छ भन्ने हेक्का नराख्दै बिज्ञता प्रदर्शनको बहुलतामा फेरि एउटा आफ्नै प्रकारको काव्य सङ्ग्रह अवलोकनमाRead More…
पुस्तक चर्चा : ‘सुवासको सपना’मा विचरण गर्दा / अरुणबहादुर खत्री ‘नदी’
January 17, 2019 पुस्तक समीक्षा, पौष (७६)
सुवासको सपना नामक बालकथा सङ्ग्रह साहित्यकार एवं कथाकार घनबहादुर थापाको २०७४ सालमा प्रकाशित भएको छ । ट्रिनिटी प्रकाशन प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित रु.११०।– मूल्यको यस बालकथा सङ्ग्रहभित्र १५ वटा बालकथा राखिएका छन् ।Read More…
व्यङ्ग्य : बडाघरेको घटिया चाला / माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे
January 17, 2019 पौष (७६), व्यङ्ग्य
नेपालका बडाघरेहरूले के सपना देखे कुन्नि हिजोआज बिपनामै पागलजस्तो भएर हिँड्न थालेका छन् । गाउँबाट राजधानी गएर बडा हुन तम्सिए पनि आखिरी चाला त घटिया नै देखाए । गाउँमा जतिसुकै बडाचाला देखाउनRead More…
कथा : सोच / आशा लिम्बू
January 17, 2019 कथा, पौष (७६)
मलाई के बैँस आएको हो त्यतिबेला ? उमेरले एक्काईस–बाईस वर्ष पुगे पनि सोह्र–सत्रजस्तो जोश जाँगर आँट आउने । त्यो समय सम्झन्छु, नाता पर्ने ठूलीआमाको घरमा हामी डेरामा बसेका थियौँ । चहलपहल, रमझमRead More…
कथा : टुलिप फूल / अर्जुन थापा
कहिले बिहान होला भनेर आँखामा निद्रा थोप्पै परेन । अरू दिनको तुलनामा आज चाँडै उठे । बिहानीले धरतीमा बिस्तारै स्पर्श गर्दै उज्यालो छरेको कति राम्रो देखिएको थियो । घरका छत तथा बाटाहरूमाRead More…
कथा : विद्रोह / पवित्रा अधिकारी
बिहे गरेको वर्षौं बित्दा पनि यी दम्पतीमा सन्तान सुखको अनुभूति थिएन । सन्तान प्राप्तीका आशामा धर्म, कर्म र औषधि मूलोको हर प्रयास भइसकेको थियो । अब छिमेकीका कलिला बच्चा देख्दा मन लोभिनुRead More…
लघुकथा : आरोप / गङ्गा आचार्य
January 17, 2019 पौष (७६), लघुकथा
शर्मिलालाई आज पनि बजार जानु थियो । तिहारको किनमेल अझै सकिएको थिएन । बाहिरफेर सजिएर निस्कनु उनको सोख थियो । सिँगारपटार गरिन् । हातको औँठी लगाउन खोजिन् । राखिरहने ठाउँमा देखिनन् ।Read More…
कथा : महिला सिट / रञ्जु खनाल
फिजमद्धारा आयोजित वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी भएर म र मेरा द्वय छात्र र छात्रा निशान्त पहाडी र प्रविधि कार्की घर फर्किने क्रममा टाउन प्लानिङस्थित बसपार्क पुग्याँै । भर्खरै मात्र पानी परेर बाटो हिलाम्मेRead More…
लघुकथा : छुट / लीलाराज दाहाल
यात्रु प्रतीक्षालयमा सार्वजनिक बस आएर रोकियो । बस पर्खनेहरूको भीड थियो । बलिया युवायुवतीहरू त ठेलठाल गरी बसमा चढे । एउटा खुट्टा काटिएर बैसाखी टेक्ने शारीरिक अशक्त शिव र जेष्ठ नागरिकहरूलाई बसRead More…